एफफेक्सोर बनाम वेलबुट्रिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समाचार प्रेस औषधि जानकारी कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य भारी खेल औषधि बनाम मित्र समुदाय, कम्पनी कम्पनी, समाचार खेलहरु कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> एफफेक्सोर बनाम वेलबुट्रिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
एफफेक्सोर बनाम वेलबुट्रिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
एफफेक्सोर (भेलाफैक्सिन) र वेलबुट्रिन (बुप्रोपियन) दुई फरक एन्टीडिप्रेसस औषधिहरू हुन् जुन डिप्रेसनको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। दुबै एफेक्सोर र वेलबुटरिनले मस्तिष्कमा नोरपाइनफ्रिन र डोपामाइन जस्ता विशिष्ट न्यूरोट्रान्समिटरहरूलाई बढावा दिएर काम गर्दछन्। यी न्युरोट्रान्समिटरहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने मनोवृत्ति सुधार गर्न, राम्रो निद्रा बढाउन, र तपाईंको भूक र फोकस बढाउन मद्दत गर्दछ। एन्टीडिप्रेसन्ट्स प्रमुख मानसिक डिप्रेसनको अतिरिक्त अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचारको लागि पनि उपयोगी छ।
उनीहरूको समानताहरूको बाबजुद, एफफेक्सर र वेलबुटरिनले बिभिन्न रूपमा काम गर्छन् र एफडीएले विभिन्न सर्तहरूको उपचार गर्न अनुमोदित छ।
एफफेक्सर र वेलबुट्रिन बीचका मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
ईफेक्सोर भेन्लाफैक्सिनका लागि ब्रान्ड नाम हो। यो रासायनिक छ Pristiq समान (desvenlafaxine) र serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) भनिने औषधि वर्गसँग सम्बन्धित छ। ईफेक्सोर दिमागमा सेरोटोनिन, नोरपाइनफ्रिन र डोपामाइनको पुनर्बर्द्धन रोक्दै काम गर्दछ। तिनीहरूको पुन: अवशोषण, वा पुनःअपटेक रोक्दै, उनीहरूको उपलब्धता र समग्र प्रभाव बढाउँदछ।
तत्काल रिलिज ट्याब्लेटमा ब्रान्ड-नाम एफैक्सोर बन्द गरिएको छ। यसको सट्टा, एफफेक्सोर एक्सआर भनिने एक विस्तारित रिलीज फारम निर्धारित गरिएको छ। एफफेक्सोर एक्सआर strengths 37..5 मिलीग्राम, mg 75 मिलीग्राम, र १ mg० मिलीग्रामको शक्तिमा आउँछ।
वेलबुट्रिन ब्यूप्रोपियनका लागि ब्रान्ड नाम हो। यो एक अद्वितीय antidepressant एमिनोकेटोनको रूपमा वर्गीकृत छ। वेलबुट्रिनले नोरपाइनफ्रिन र डोपामाइन न्यूरोट्रान्समिटरको पुनःअपटेक रोक्न उनीहरूको प्रभाव बढाउनको लागि काम गर्ने विश्वास गरिन्छ। ईफेक्सोरको विपरीत, वेलबुट्रिनले सेरोटोनिन स्तर त्यति परिवर्तन गर्दैन।
वेलबुट्रिन तत्काल रिलीज मौखिक ट्याब्लेटहरूमा strengths 75 मिलीग्राम वा १०० मिलीग्रामको शक्तिको साथ आउँदछ। यद्यपि यो सामान्यतया निरन्तर रिलीज ट्याब्लेट (वेलबुट्रिन एसआर) वा विस्तारित रिलीज ट्याब्लेट (वेलबुट्रिन एक्सएल) को रूपमा तोकिन्छ। वेलबुट्रिन एसआर र वेलबुटरिन एक्सएल शरीरमा बिस्तारै छोडिन्छ र दिनको एक पटक लिन सकिन्छ।
ईफेक्सोर र वेलबुट्रिन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग सेरोटोनिन-नोरपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू (SNRIs) एमिनोकेटोन
जेनेरिक नाम के हो? भेन्लाफैक्सिन Bupropion
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक ट्याब्लेट मौखिक ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? सुरुमा, प्रति दिन mg 75 मिलीग्राम। खुराक हरेक days दिनमा mg 75 मिलीग्राम प्रति दिन वृद्धि हुन सक्दछ। खुराक विभाजित खुराकमा प्रति दिन अधिकतम २२5 मिलीग्रामभन्दा बढी हुनुहुँदैन। सुरुमा, १०० मिलीग्राम दैनिक दुई पटक। Days दिन पछि, खुराक दैनिक १०० मिलीग्राम times पटकसम्म बढाउन सकिन्छ। खुराक एक पटकमा १ mg० मिलीग्रामको एक खुराक भन्दा बढि हुनु हुँदैन।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? दीर्घकालीन उपचार दीर्घकालीन उपचार
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क १ 18 बर्ष र माथिका वयस्क १ 18 बर्ष र माथिका
ईफेक्सोर र वेलबुटरिनद्वारा उपचारित अवस्थाहरू
ईफेक्सोरलाई ठूलो डिप्रेशन वा ठूलो डिप्रेशन डिसआर्डरको उपचार गर्न लेबल गरिएको छ। यसले अन्य मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको बीचमा चिन्ताका विकारहरूको पनि उपचार गर्न सक्दछ। तत्काल रिलीज भेन्लाफैक्सिनले आतंक आक्रमणहरूको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ जबकि विस्तारित-रिलीज फारम उपचारको लागि स्वीकृत हुन्छ सामान्यीकृत चिन्ता विकार । एफफेक्सोरको अफ-लेबल प्रयोगहरूले जुनूनी-बाध्यकारी डिसऑर्डर (ओसीडी) र प्रीमेन्स्ट्रियल डिस्फोरिक डिसअर्डर (पीएमडीडी) को उपचार समावेश गर्दछ।
वेलबुट्रिन प्रमुख डिप्रेशन डिसआर्डर र मौसमी अनुहार विकारको उपचार गर्न एफडीए स्वीकृत हुन्छ। कहिलेकाँही यो द्विध्रुवी विकार, ध्यान घाटा hyperactivity डिसअर्डर (ADHD), र एसएसआरआई एन्टीडिप्रेससन्ट्सको कारण हुने यौन रोगको उपचार गर्न अफ-लेबल औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
सर्त ईफेक्सोर वेलबुट्रिन
प्रमुख उदासीनता विकार हो हो
सामान्यीकृत चिन्ता विकार हो हैन
आतंक विकार हो हैन
जुनूनी बाध्यकारी विकार अफ-लेबल हैन
मासिकपूर्व डिस्फोरिक डिसअर्डर अफ-लेबल हैन
द्विध्रुवी विकार अफ-लेबल अफ-लेबल
ध्यान घाटा hyperactivity डिसअर्डर (ADHD) अफ-लेबल अफ-लेबल
मौसमी स्फूर्ति विकार अफ-लेबल हो
के ईफेक्सोर वा वेलबुट्रिन बढी प्रभावकारी छ?
ईफेक्सोर र वेलबुट्रिन डिप्रेसन लक्षणहरूको उपचारका लागि प्रभावकारी औषधीहरू हुन्। यद्यपि अधिक प्रभावकारी एन्टिडप्रेससन्ट भनेको तपाईको लागि उत्तम कार्य गर्दछ।
एक अनुसार मेटा-विश्लेषण , एफफेक्सोर र वेलबुट्रिन ठूला डिप्रेशनर डिसअर्डरका साथ वयस्कहरूको उपचारको लागि त्यस्तै प्रभावकारी छन्। जे होस् ती दुबै समान कार्य गर्दछ, वेलबुट्रिनले कम सेक्सु डिसफंक्शनलाई साइड इफेक्टको रूपमा उत्पादन गर्ने देखाइएको छ। यौन रोग एन्टीडिप्रेससन्टको सामान्य साइड इफेक्ट हो, विशेष गरी छनौट सेरोटोनिन पुनःअपटेक इनहिबिटर (एसएसआरआई)।
वेलबुट्रिन र एफफेक्सोरलाई एसएसआरआई एन्टिडेप्रेसन्टहरू जस्तै सेर्टरलाइन, एस्केटलोप्राम, फ्लुओक्सेटीन, प्यारोक्सेटीन, र डुलोक्सेटिनसँग पनि तुलना गरिएको छ। क्लिनिकल परीक्षण देखाईयो कि वेलबुट्रिन एसएसआरआईको प्रभावकारितामा समान छ। यसको विपरीत, एफिएक्सोर भएको छ बढी प्रभावकारी भएको पाए एसएसआरआई भन्दा बढि व्यक्ति साइड इफेक्टका कारण एफिएक्सोर लिन रोक्न सक्छन्।
तपाईंको लागि उत्तम उपचारको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्। तपाईंको समग्र लक्षणहरूको पूर्ण मूल्या After्कन पछि, तपाईंको डाक्टरले उपयुक्त औषधी फेला पार्न काम गर्नेछ।
कभरेज र एफफेक्सर बनाम वेलबुट्रिनको लागत तुलना
ईफेक्सोर एक्सआर लाई एक पर्चेको आवश्यक छ। यो प्राय जसो मेडिकेयर र बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको हुन्छ। Mg 75 मिलीग्राम ट्याब्लेटको -० दिने आपूर्तिको लागि, औसत खुद्रा लागत १ डलर जति छ। एफफेक्सर एक्सआर सिंगलकेयर कार्ड प्रयोग गर्नाले तपाईले प्रयोग गरेको फार्मेसीमा निर्भर रहँदै यस मूल्यलाई १$ डलरमा कम गर्न सक्छ।
तपाईंको डाक्टरले वेलबुट्रिन एसआर वा वेलबुट्रिन एक्सएल सम्भाव्य रूपमा सल्लाह दिनेछ। वेलबुटरिनको यी संस्करणहरूले शरीरमा बिस्तारै औषधि छोड्छ। अधिकांश मेडिकेयर र बीमा योजनाहरूले वेलबुटरिन एक्सएल वा वेलबुटरिन एसआरलाई कभर गर्दछ। यदि तपाईंसँग बीमा छैन भने, वेलबुट्रिनको औसत नगद मूल्य १०० भन्दा बढी हुन सक्छ। तपाईसँग बीमा छ भने पनि तपाईले प्रिस्क्रिप्शनमा पैसा बचाउन वेलबुट्रिन एक्सएल सिंगलकेयर कार्ड वा वेलबुट्रिन एसआर सिंगलकेयर कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
सामान्यतया चिकित्सा भाग डी द्वारा कभर? हो हो
मानक खुराक ईफेक्सोर एक्सआर: दैनिक once 75 मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू (of० को मात्रा) वेलबुट्रिन एसआर / एक्सएल: दैनिक १ 150० मिलीग्राम ((० को मात्रा)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०– $ १ $ 0– $ 22
एकलकेयर लागत $ १ + + + ११ +
एफफेक्सर बनाम वेलबुट्रिनको साझा साइड इफेक्टहरू
एफफेक्सोरको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू निन्द्रा, अनिद्रा, चक्कर आउने, घबराहट, मतली, र टाउको दुखाइ हो। अन्य सामान्य साइड इफेक्टमा सुख्खा मुख, मांसपेशि कमजोरी, पसिना, र बढेको मुटुको दर (धडकन) समावेश छ। यौन साइड इफेक्ट , यौन डिसफंक्शन र असामान्य स्खलन सहित, एफफेक्सोर प्रयोग गर्दा पनि सामान्य हो।
वेलबुट्रिनको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभावहरू अनिद्रा, चक्कर आउने, सुख्खा मुख, मतली, टाउको दुख्ने, र पसिना बगाउने हो। वेलबुट्रिनले अन्य छेउछाउका असरहरूका साथै घबराहट, मांसपेशी कमजोरी, र धडपड हुन सक्छ।
ईफेक्सोर र वेलबुटरिनले पनि तौल परिवर्तन गर्न सक्दछ। दुबै एन्टीडिप्रेसन्टहरूले या त वजन बढाउन वा औषधि प्रति तपाईंको प्रतिक्रियामा निर्भर गर्दछ।
एफेक्सोर र वेलबुट्रिनको गम्भीर दुष्प्रभावहरूमा नयाँ वा बिग्रिएको मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, आत्मघाती विचारहरू, आन्दोलन, र वैमनस्यता समावेश छ। यी औषधिहरू लिँदा मुडमा कुनै परिवर्तनहरू निगरानी गर्नुहोस्। यदि तपाईले कुनै गम्भीर साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्नुभयो भने आफ्नो हेल्थकेयर प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
तन्द्रा हो %% हैन -
अनिद्रा हो %% हो १%%
चक्कर हो %% हो २२%
नर्भस हो दुई% हो 1.१%
सुख्खा मुख हो दुई% हो २%%
मतली हो %% हो २.%%
टाउको दुखाई हो %% हो २%%
मांसपेशी कमजोरी हो दुई% हो *
धमकी हो * हो %%
पसिना हो दुई% हो २२%
असामान्य स्खलन हो %% हैन -
* रिपोर्ट गरिएको छैन
फ्रिक्वेन्सी हेड-टु-हेड ट्रायलबाट डेटामा आधारित हुँदैन। यो देखा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावहरूको पूर्ण सूची नहुन सक्छ। अधिक जान्नको लागि कृपया तपाइँको डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
स्रोत: एफडीए लेबल ( ईफेक्सोर ), एफडीए लेबल ( वेलबुट्रिन )
ईफेक्सोर बनाम वेलबुट्रिनको ड्रग अन्तरक्रिया
एफफेक्सोर र वेलबुट्रिनले मोनोमाइन अक्सिडेज इनहिबिटरहरू (MAOIs) सँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्। एमएओआई लिनु, जस्तो कि isocarboxazid वा phenelzine, एफिएक्सोर वा वेलबुट्रिनको साथ सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिम बढाउन सक्छ। ईफेक्सोर र वेलबुटरिनलाई एक एमएओआईको साथ वा MAOI रोक्नको १ 14 दिन भित्र लिन हुँदैन।
कहिले सम्म योजना बी साइड इफेक्ट को लागी अन्तिम हुन्छ
ईफेक्सोर र वेलबुट्रिनले सेरोटोनर्जिक ड्रग्ससँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्। उदाहरण को लागी, सेरोटोनर्जिक औषधि जस्तै नोर्ट्रिप्टिलाईन, एक tricyclic antidepressant, ले अर्को antidepressant सँग जोडेर सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिम बढाउन सक्छ। एफफेक्सोर र वेलबुट्रिनलाई सेन्ट जोन्स वर्टसँग पनि अलग रहनु पर्छ, जडिबुटी औषधि बारम्बार यसको एन्टीडिप्रेसस प्रभावहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाइँ ईफेक्सोर वा वेलबुट्रिन सुरू गर्नु अघि अन्य एन्टिडिप्रेसन्ट्स लिइरहनुभएको छ भने आफ्नो डाक्टरलाई भन्नुहोस्।
ईफेक्सोर र वेलबुट्रिनले प्लेटलेटहरू र रगत जमाउने कार्यलाई असर गर्न सक्छ। एफफेक्सोर वा वेलबुट्रिनको प्रयोगले वारफेरिन वा अन्य एन्टिकोआगुलेन्टहरूको प्रभावकारिता कम गर्न सक्छ।
औषधि औषधि वर्ग ईफेक्सोर वेलबुट्रिन
Selegiline मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधकर्ताहरू (MAOIs) हो हो
सेन्ट जोन वर्ट सेरोटोनर्जिक ड्रग्स हो हो
वारफेरिन एन्टिकोआगुलेन्टहरू हो हो
अन्य सम्भावित ड्रगको अन्तर्क्रियाको लागि स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह लिनुहोस्।
एफेक्सोर र वेलबुट्रिनको चेतावनी
एफेक्सोर वा वेलबुट्रिनको प्रयोगले आत्महत्या गर्ने विचारहरूको बढ्दो जोखिम निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी वयस्कहरूमा र युवा वयस्कहरूमा। एफिएक्सोर वा वेलबुट्रिन जस्ता औषधि सुरू गर्दा ब्यवहार र मुड परिवर्तनहरू अनुगमन गरिनु पर्छ। यदि तपाईंले गम्भीर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभयो भने, एन्टीडिप्रेसन्ट्स तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकद्वारा बन्द वा समायोजित हुन सक्छ।
ईफेक्सोर र वेलबुटरिनले रक्तचाप बढाउन सक्छ। त्यसकारण, यी औषधीहरू लिने क्रममा रक्तचाप मोनिटर गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ यी औषधीहरू लिनु अघि उच्च रक्तचापको इतिहास छ भने आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
एसएसआरआई र एसएनआरआई जस्तो केहि एन्टीडिप्रेससहरूले रक्तस्रावको जोखिम बढाउन सक्छ। एफेक्सोर लाई एन्टिकोआगुलेन्ट्स र रगतका थक्वालाई असर गर्ने अन्य औषधीहरूको प्रयोगबाट अलग रहनु पर्छ। वेलबुट्रिन, जुन एसएसआरआई वा एसएनआरआई होइन प्लेटलेट कार्यहरूमा प्रभाव पार्ने कम सम्भावना ।
जब सेरोटोनर्जिक ड्रग्सको साथ प्रयोग गरिन्छ, एफिएक्सोर र वेलबुटरिनले सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिम बढाउन सक्छ। सेरोटोनिन सिन्ड्रोमका लक्षणहरूमा बढेको मुटुको दर, रक्तचाप बढ्यो, र ज्वरो पर्छ। यदि तपाइँ यी लक्षणहरू मध्ये कुनै अनुभव गर्नुहुन्छ भने आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। सेरोटोनिन सिन्ड्रोमलाई आपतकालीन चिकित्सा उपचार आवश्यक पर्न सक्छ।
एफफेक्सर बनाम वेलबुट्रिनको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
एफफेक्सोर भनेको के हो?
ईफेक्सोर एक ब्रान्ड नाम औषधि हो जुन प्रमुख डिप्रेशन डिसआर्डरको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। एफफेक्सोरको जेनेरिक नाम भेलाफैक्सिन हो। एफफेक्सोर एक्सआर एफेक्सोरको विस्तारित रिलिज संस्करण हो र दैनिक एक पटक लिन सकिन्छ। एफफेक्सोरले चिन्ता र आतंक विकारहरूको पनि उपचार गर्न सक्दछ।
वेलबुट्रिन भनेको के हो?
Wellbutrin यसको सामान्य नाम bupropion द्वारा चिनिन्छ। यो मुख्यतया प्रमुख अवसादग्रस्त डिसआर्डरको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। वेलबुट्रिन सामान्यत: वेलबुट्रिन एसआर वा वेलबुट्रिन एक्सएल डिप्रेसन र अन्य मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको उपचारको रूपमा सिफारिश गरिन्छ। वेलबुट्रिनको विस्तारित-रिलीज फारम दैनिक एक पटक लिन सकिन्छ।
ईफेक्सोर र वेलबुटरिन एकै हो?
दुबै एफिएक्सोर र वेलबुटरिनले डिप्रेसनको लक्षणहरूको उपचार गर्न सक्छन्। जे होस्, ईफेक्सोर एक सेरोटोनिन-नोरपाइनफ्रिन रिउपटेक इनहिबिटर (SNRI) हो र वेलबुटरिन एक एमिनोकेटोन हो। तसर्थ, यी औषधिहरू बिभिन्न तरिकाहरूमा काम गर्दछन्। तिनीहरूसँग बिभिन्न एफडीए-अनुमोदित प्रयोगहरू छन्।
ईफेक्सोर वा वेलबुट्रिन राम्रो छ?
ईफेक्सोर र वेलबुटरिन दुबै प्रभावकारी औषधि हुन् जसले डिप्रेसनको उपचार गर्दछन्। एफफेक्सर वेलबुट्रिन भन्दा राम्रो छ चिन्ता बिरामीहरूको उपचारको लागि जुन डिप्रेसनको साथ अनुभव गरिन्छ। यद्यपि, वेलबुट्रिनको तुलनामा, एफफेक्सोरले अधिक यौन साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै असामान्य स्खलन र नपुंसकता।
के म गर्भवती हुँदा एफेक्सोर वा वेलबुट्रिन प्रयोग गर्न सक्छु?
ईफेक्सोर र वेलबुट्रिन गर्भावस्थाको वर्ग सीमा छन् र जन्म दोषहरूको जोखिम बढाउन सक्छ। दुबै औषधिहरू पनि आमाको दुधमा स्रावित हुन्छन्। एफेक्सोर र वेलबुट्रिनको प्रयोगलाई गर्भावस्थामा सावधानी अपनाउनु पर्छ वा टाढा बस्नु पर्छ।
म रक्सीको साथ ईफेक्सोर वा वेलबुट्रिन प्रयोग गर्न सक्छु?
एफेक्सोर वा वेलबुट्रिन लिँदा रक्सी पिउन सिफारिस गर्दैन। एफेक्सोर वा वेलबुट्रिनको साथ रक्सीको प्रयोगले निद्रा, चक्कर, र अन्य साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ। रक्सीको प्रयोगले पनि वेलबुटरिन लिने व्यक्तिहरूमा दौरा हुने खतरा बढाउन सक्छ।
रिपोर्ट: उपभोक्ता प्रभाव २०२१ औषधि मूल्य बढ्छ
पूरै खुराक, फारमहरू, र शक्तिहरू
गर्भावस्थामा के एलर्जी औषधि लिन सक्छु?
कसरी थाहा पाउनुहोस् यदि तपाइँ मुटुको समस्या छ
सामान्य वयस्कहरु को लागी रक्त शर्करा को स्तर
कति पटक तपाइँ ibuprofen 200mg लिन सक्नुहुन्छ
कसरी तुरुन्तै आज रक्तचाप कम गर्न को लागी